ကိုယ့်ရဲ့စပွန်ဆာက ကိုယ့်မိဘပါပဲ ~ အိန်ဂျယ်လမုန် - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
ကိုယ့်ရဲ့စပွန်ဆာက ကိုယ့်မိဘပါပဲ ~ အိန်ဂျယ်လမုန်
03 August, 2017, 01:03 PM
ကလောင် - မေသက်
မျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင် အိန်ဂျယ်လမုန်ကို ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ 8days Cover Star အဖြစ်ရွေးချယ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. လတ်တလော လုုပ်ဖြစ်နေ တာတွေက...
A. “ည” ခုလတ်တလောက မြစ်ကြီးနားက စစ်ရှောင်စခန်းတွေ ကိုသွားပြီး စစ်ရှောင်ရန်ပုံငွေအတွက် ဖျော်ဖြေမှုတွေလုုပ်ခဲ့တယ်။ ခုဆို ကျောင်းတွေဖွင့်တော့ ကလေးတွေ ကျောင်းတက်ဖို့ ရန်ပုံငွေလိုလာပြီဆိုု တော့ မြစ်ကြီးနားမှာလုပ်တဲ့ ရန်ပုုံငွေ ပွဲတစ်ခုကို လက်ခံဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ “ည” လက်ခံထား တဲ့ ကြော်ငြာလေးတွေ ရိုက်ကူးဖြစ် နေတယ်။ “ည” ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင် တစ်ကားနဲ့ ဗီဒီယိုနှစ်ကားထွက်ဖိုု့ကို စောင့်နေတယ်။
Q. ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ဖို့ လက်ခံ တဲ့အခါ ဘာကို အဓိကထားကြည့် ပြီးလက်ခံဖြစ်လဲ။
A. “ည”ကသရုပ်ဆောင်သစ် ဖြစ်သလိုု ခုုမှစပြီးရိုက်တာဆိုုတော့ အရမ်းကြီးရွေးချယ်လိုု့မရသေးဘူး။ “ည” လက်ခံပြီးသားဇာတ်ရုပ်မှာတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သရုပ် ဆောင်တယ်။ “ည” ပရိသတ်တွေ အတုယူမှားစေမယ့် ဇာတ်ရုပ်မျိုးတော့ “ည” သရုပ်ဆောင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ “ည” မိဘတွေကလည်း အဲဒီလို ဇာတ်ရုပ်မျိုးရိုက်ခိုင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာပေး ဇာတ်လမ်းတွေမျိုးဆိုရင်တော့ ရိုက်မယ်။
Q. သရုပ်ဆောင်သစ်တစ် ယောက်အတွက် ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲကဘာဖြစ်မလဲ။
A. သရုပ်ဆောင်သင်တန်း မတက်ထားတော့ “ည”က ပိုအခက်အခဲရှိတယ်ထင်မိပါတယ်။ ကင်မရာကို ကြောက်သူမဟုတ်ပေမယ့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ရတာကျတော့ ပုုသေရိုက်ရတာ မဟုုတ်ဘူးလေ။ ဒိုင်ယာလော့ခ်တွေပြောရတယ်။ သရုပ်ဆောင်ရတယ်။ သဘာဝကျ နေအောင်သရုပ်ဆောင်ရတယ်။ “ည” က တိုင်းရင်းသူဖြစ်သူဖြစ်တော့ စကားပြောလေယူလေသိမ်းတွေမှာ မြန်မာစကားပြောတတ်ပေမယ့် သူများထက် ပိုခက်ခဲတယ်ထင်တယ်။ Camera angle မှာ ကိုယ် သရုပ်ဆောင်နေရင်းမျက်နှာကို ဘယ်လိုထားရမလဲ မသိသေးဘူး။ “ည”က သိတတ်စအရွယ်မှာ မန္တလေးမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ မြန်မာစကား အရမ်းမပီတဲ့အထဲမှာ မပါဘူး။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း မြန်မာ စကားပြောသူတွေရှိတယ်။ “ည”ကို ထိန်းတဲ့သူကလည်းမြန်မာ စကားပြောတာဆိုတော့ “ည”အတွက် သိပ်အခက်အခဲ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ “ည” စကားပြောတာ တကယ့်မြန်မာစစ်စစ်တွေက နားထောင်ရင်တော့လေ ယူလေသိမ်းတွေ မှားနေတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ “ည”အများဆုံး မပီတာ ‘တ’ နဲ့ ‘သ’ ခုထွက်မယ့်ရုပ်ရှင်မှာ “ည”နာမည်က သက်တန့် အဲဒီစကားလုုံး ပြောတိုုင်း ခဏခဏမှားတယ်။
Q. ဒီအနုပညာအလုပ်က ကိုယ့်ရဲ့ ငယ်ဘဝ အိပ်မက်တစ် ခုလား။
A. အနုပညာက “ည”ဘဝရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ မိဘတွေ အဘိုုးအဘွားတွေကအစ “ည”ကို ပညာရေးဘက်ကိုပဲသွား စေချင်တယ်။ သူတိုု့တွေက “ည”ရဲ့ ပညာရေးအတွက် အများကြီးပ့ံပိုး ပေးထားတော့ ပညာရေးပဲအာရုံစိုက် စေချင်တယ်။ “ည”အဖေက လုုံးဝ သဘောမတူဘူး “ည”သရုပ်ဆောင် လုုပ်တာကိုု။ “ည”အမေကကျတော့ သူကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်အရမ်း ဖြစ်ချင်ခဲ့တာဆိုတော့ “ည”သရုပ် ဆောင်လုပ်တာ အရမ်းပ့ံပိုးပေး တယ်။ “ည”က ဒီလောကထဲ တစ် ယောက်တည်း လုပ်ရတာမဟုတ် နောက်မှာ အမေက “ည”ရဲ့ အကျႌ အဝတ်အစား မိတ်ကပ်ဆံပင်ဖိနပ် အကုန်လိုတာမှန်သမျှ ဆင်ပေးတယ်။
Q. မြန်မာနိုင်ငံထဲက “ည” အချစ်ဆုုံး မြို့က ဘယ်မြို့လဲ။
A. မြန်မာနိုင်ငံကို “ည”ချစ် တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေရတာ “ည”တကယ်လည်း ဂုုဏ်ယူပါတယ်။ “ည”တို့နိုင်ငံက သယံဇာတအရမ်းပေါ များတယ်။ ရွှေနိုင်ငံလို့တောင်တင် စားခေါ်ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့မြို့တိုင်းက သူ့ဟာနဲ့သူတန်ဖိုး ရှိလှပတယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အလှက ဘယ်ဟာမှ မတူညီနိုင်ဘူး။ ဒေသ တိုင်းမှာ ဒေသထွက်ကုန်ဆိုတာရှိတယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ အဲဒါမျိုးမရှိဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဘယ်မြို့ကို သွားသွား “ည”သဘောကျတယ်။နေရာတိုင်းမှာသူ့အလှ ကိုုယ်စီနဲ့ရှိ တယ်။ “ည”သဘောကျတဲ့ ရာသီဥ တုရှိတယ်။
Q. အမေက အနုပညာ အလုပ်အပေါ် ဘယ်လောက်ထိပ့ံပိုုး ပေးလဲ။
A. ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့။ အမေ က “ည” မွေးကတည်းကနေ ခုချိန်ထိ ပ့ံပိုးမှုပေးတုန်း။ “ည”ရှုတင်ဆိုလည်း အမေကထိုင်မနေဘူး။ “ည” သရုပ်ဆောင်တာ သူကြည့်နေတာ ဘယ်လောက်ထိကြည့်လဲဆို “ည”က အနူး မကြည့်နဲ့တော့လို့တောင်ပြောယူ ရတယ်။ “ည”သရုပ်ဆောင်တာလိုနေရင်လည်း အသေးစိတ် ဝေဖန်တာ “ည”က မသိဘူးဆို သွားကင်မရာမှာ သွားကြည့်ဆိုပြီး ပြောတာ။ “ည”စပွန်ဆာက “ည”ရဲ့ မိဘပါပဲ။ “ည”ရဲ့ အဖေက ငွေထုတ်ပေးတာ အမေက အသေးစိတ် လိုက်ဂရုစိုက် ပြင်ဆင် ပေးတာလေ။
Q. အလုပ်တွေမရှိတဲ့ အားလပ်ရက်မှာ ဘယ်လိုအပန်းဖြေ ဖြစ်လဲ။
A. အလုပ်မရှိတဲ့ အားလပ် ရက်တွေဆိုရင် “ည”က များသော အားဖြင့်စာအုပ်ဖတ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘုရားကျောင်းသွားတယ်။ “ည”အားလပ်ချိန်တွေက ဘုရားကျောင်းမှာရှိတာများပါတယ်။ အရင်ကတည်းက အားလပ်ချိန်ဆို ဘုရားကျောင်းမှာလိုတာတွေ လုပ်ပေးတယ်။ ခုု အနုုပညာ လုပ်တော့လည်း အချိန်ကို မရ ရအောင်ယူပြီး ဘုရားကျောင်းသွား ဘုရားမှာ ဆက်ကပ်တယ်။
Q. ငယ်ငယ်တုန်းက “ည”အတူ သရုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မျိုးရှိလား။
A. ညငယ်ငယ်တုုန်းကတော့ သရုပ်ဆောင် ကိုုသားကြီး ဒွေးကိုု သဘောကျတယ်။ “ည” ကြိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကအများကြီးရှိ တယ်။ ကိုသားကြီးကိုကျတော့ “ည”ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မထက် ထက်မိုးဦးနဲ့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ ကြော် ငြာတွေမှာ သဘာဝကျလို့ အရမ်းသဘောကျခဲ့တာ။ ကိုသားကြီးက အသားညိုတယ်၊ အရပ်လည်း အမြင့်ကြီးမဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့စွဲဆောင်မှုကဘယ်မှာရှိနေမှန်း ကိုယ်သေချာ မသိဘဲ သူ့ကို သဘောကျခဲ့တာ။